Published June 15, 2020 at 8:17 PM CDT
Degmada Siouxland Health waxay diiwaan gelisay afar xaaladood oo togan oo kale mana jiro dhimasho cusub oo ka dhacday Gobolka Woodbury Tirada dadka u dhinta cudurka 'coronavirus' waxay gaarayaan 39. Websaydhka 'Iowa Coronavirus' wuxuu muujinayaa in hadda in kabadan 3,000 oo xaaladood oo wanaagsan laga helay Gobolka Woodbury.
Gobolka oo dhan waxaa jira in kabadan 24,000 xaaladood oo togan iyo 654 dhimasho ah. Waxaa jiray hal dhimasho oo la duubay muddadii 24-ka saacadood ahayd oo dhammaatay 10-ka subaxnimo.
Nebraska waxaay diiwaangashay in kabadan 16,700 xaaladood oo qumman iyo 216 dhimasho.
Waaxda Caafimaadka ee South Dakota waxay xaqiijisay 30 kiis oo ah wararka in kabadan 5,900 iyo 75 dhimasho ah.
Waxa jira cusbitaal ku yaal Rushmore State 87 qof.
Halkan Sioux City, MercyOne iyo Unity-Point Health St. Luke waxay leeyihiin waxay daaweynayaan wadarta 54 bukaan COVID-19 ah. Taasi waa hoos u dhac sagaal bukaan ah maalintii ka hor.
Madaxweyne ku xigeenka Mike Pence ayaa qorsheynaya inuu ku laabto Iowa Talaadada. Wuxuu la kulmi doonaa gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds wuxuuna booqan doonaa wershadaha Winnebago.
Pence wuxuu booqday Des Moines bilowgii May inta lagu gudajiray kiisaska cudurka coronavirus ee gobolka.
Sharci-dejinta Iowa ayaa dib loo dhigay sanadka ka dib fadhigii uu ku soo gaabiyay masiibada.
Republicans-ka ayaa ku riixay wax ka beddelka iyagoo abuuraya muddo 24 saac oo sugitaan ah oo ilmo soo rididda ah, mid kalena waxay leeyihiin waxay caqabad ku noqonaysaa awoodda codbixiyayaasha qaar inay u isticmaalaan waraaqaha cod-bixinta.
Sharci-dajiyayaashu si dhakhso ah ayey u meel mariyeen tallaabo lagu xakamaynayo adeegsiga bilayska ee ku-meel-gaadhka ah isla markaana waxay sameeyaan is-beddello kale oo bilays ah
Xisbiga Reynolds ee xisbigiisa iska leh ayaa diidey wax ka badal dastuurka si loogu soo celiyo xuquuqda codbixinta ee tobanaan kun oo dambi.
Hogaamiyaasha Madowga Madowga ah ayaa sheegay in Reynolds uu balanqaaday inuu saxeexayo amar fulin si dib loogu soo celiyo xaquuqda codbixinta waqtiga doorashada guud, laakiin taasi uma badna inay dhacdo ilaa dhamaadka xagaagan.
Waxay la kulmeen gudoomiyaha gobolka caasumada subaxa hore halka daraasiin mudaaharaad ah ay isugu soo baxeen banaanka qolka iyagoo ku dhawaaqaya "ha codeeyaan."
Chris Doyle wuxuu u maqanyahay sidii awooda kubada cagta ee Iowa iyo macalinka shuruudaha. Isaga iyo jaamacaddu waxay ku heshiiyeen heshiis kala go 'oo lagu siinayo lacag ka badan $ 1.1 milyan.
Doyle waxaa lagu eedeeyay ciyaartoy hore inuu si xun ula dhaqmay ciyaartoy Mareykan Mareykan ah.
Jaamacadda ayaa sheegtay in shirkad sharciyeed la shaqaaleysiiyay si ay u sameeyaan dib u eegis madax banaan oo ku saabsan barnaamijka kubada cagta.
Local News LocalIowaMike PenceNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsMercyOneUnityPoint Health St. Luke'sCOVID-19Siouxland District HealthSomaliDakota County Health Department